DataNumen: Iwu nkwụghachi
Home nkwụghachi iwu
Anyị nwere obi ike na ogo ngwaahịa na ọrụ anyị na anyị na-enye gị nkwa atọ ndị a n'ime ụbọchị 30 nke ịzụta gị, iji jide n'aka na afọ ojuju 100%.
Anyị na-enye ndị kasị mma data mgbake ngwaahịa na ọrụ na ụwa. Ọ bụ ya mere anyị ji kee anyị Kasị Mma Iweghachite ™ - Anyị na-ekwe nkwa na ngwaahịa na ọrụ anyị ga-agbake kacha data gị mebiri emebi faịlụ, usoro ma ọ bụ ngwaike. Ọ bụrụ n’ịchọta ngwa ọrụ nwere ike ịghachite data karịa nke anyị, anyị ga-akwụghachi usoro gị zuru ezu!
Nkwenye a na-akwado ọrụ ndu anyị na ntinye aka nye ndị ahịa anyị. Anyị bụ ndị mbụ na naanị ụlọ ọrụ mgbake data na-enye ndị dị otú ahụ a ego-azụ nkwa, na-egosipụta obi ike dị ukwuu na anyị na ngwaahịa.
Maka ozi zuru ezu, biko pịa Ebe a.
Gbalịa Tupu Guzụ Nkwa
A na-ere ngwaahịa anyị niile na ọnọdụ ịnwale tupu ịzụta. Nke ahụ bụ, ịnwere ike ibudata ma jiri ụdị ngosi ahụ weghachite faịlụ gị rụrụ arụ, na-akwụghị ụgwọ. Ọ bụrụ na enwere ike weghachite faịlụ ahụ, ụdị ngosi ahụ ga-egosi nhụchalụ nke ọdịnaya enwetara, ma ọ bụ mepụta faịlụ ngosi, ma ọ bụ abụọ. Dabere na demo version si na ya pụta, ị pụrụ ịmata ma data na ị chọrọ nwere ike natara ma ọ bụ.
Mgbe ahụ, mgbe ịzụrụ ụdị nke zuru ezu, ọ bụrụ na faịlụ ahụ edoziri site na ụdị zuru ezu adabaghị na nsonaazụ ngosi nke ngosi ahụ, anyị ga-akwụghachi usoro gị
Nkwado afọ ojuju nke 100%
Ọ bụ ezie na nkwa abụọ ahụ dị n’elu ga-eme ka ị hụ kacha mma na most arụpụta mgbake na-eju afọ, anyị na-aga otu nzọụkwụ ọzọ, site na ịnye nkwa afọ ojuju 100%. Ọ bụrụ n ’otu ọ bụla, afọ adịghị eju gị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ị zụrụ, mgbe ahụ ị nwere ike nweta nkwụghachi zuru ezu.
Mara: Ikwesiri ịkọwa ihe kpatara nkwụghachi na nkọwapụta. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, mbụ rụrụ arụ faịlụ a na-chọrọ maka nkwenye nzube naanị. A ga-edebe faịlụ gị na data gị na nzuzo 100%. Lee nke anyi amụma nzuzo maka nkọwa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga-abanye gị NDA iji kwe nkwa nke a.